कारागारका कैदी : अस्पताल जाने निहुँ पारेर होटलमा मोज ! || समाचार
कारागारका कैदी : अस्पताल जाने निहुँ पार...
कारागारका कैदी : अस्पताल जाने निहुँ पारेर होटलमा मोज !
काठमाडौं / काठमाडौंका कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरु अस्पताल जाने निहुँ पारी होटलमा गएर मोज गर्ने गरेको रहस्य खुलेको छ ।
सुडान घोटाला काण्डमा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भई डिल्लीबजारको कारागारमा सजाय भोगिरहेका ठेकेदार शम्भु भारती अस्पतालको निहुँ पारेर होटलसम्म पुगेको रहस्य सार्वजनिक भएको हो ।
ठेकेदार भारतीलाई कारागार प्रशासनका प्रहरीले उपचार गराइदिने बहानामा ललितपुरको कुपण्डोलमा रहेको होटल हिमालयमा पु¥याएको पाइएको छ ।
गत कात्तिक २१ गते वीर अस्पताल जाने कागजात बनाएर भारती होटल हिमालय पुगेका थिए । उनलाई सहयोग गरेको आरोपमा महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले असई प्रकाश ढाँटलाई निलम्बन गरेको छ ।
यसैगरी उक्त घटनाको छानबिन गर्न ललितपुर प्रहरी परिसरले प्रहरी उपरीक्षक दुर्गा सिंहको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । परिसर प्रमुख एसएसपी टेकबहादुर राईले शुक्रवार गठन गरिएको समितिलाई तीन दिनभित्र प्रतिवेदन दिन निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।
ठेकेदार भारतीको कम्पनीबाट खरीद भएको प्रहरी बन्दोवस्तीको सामानमा अनियमितता भएको पाइएपछि पक्राउ परेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतबाट १४ करोड २० लाख बिगो र जरिवानासहित एक वर्ष जेल सजाय फैसला सुनाइएका भारती १३ भदौमा पक्राउ परेका थिए ।
हड्डी सम्बन्धी समस्याको उपचारका लागि भन्दै भारतीलाई वीर हस्पिटल भर्ना गर्न डिल्लीबजार कारागारले अनुमति दिएको थियो । तर, अस्पतालबाट फर्किने क्रममा डिल्लीबजार कारागार नभई उनीहरु चढेको गाडी कुपण्डोल पुगेको थियो । पछि भारती अर्को गाडीबाट कारागार फर्के पनि उनको उपचारको पुर्जी भने पहिलेको ट्याक्सीमा छोडिएको थियो ।
ट्याक्सी चालकले उक्त पुर्जी होटलका गार्डलाई दिएको र गार्डले त्यही बेला होटलमा खटिएका महानगरीय प्रहरी प्रभाग, पुल्चोकका अधिकृतलाई कागज दिएपछि घटनाको पर्दाफास भएको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले जनाए ।